Iindaba -IsiThandathu se-China-Russia Expo, Harbin, China
IHarbin yeHlabathi yezoQoqosho nezoRhwebo (efinyezwe njenge-HTF), eyasekwa ngo-1990, ibibanjwe ngempumelelo iminyaka engama-29 ilandelelana. Ngenjongo "yokuqaqambisa iRussia, ukujongana ne-Northeast Asia, ukuSasaza iHlabathi, ukuKhonza kulo lonke elase China", i-HTF yenye yemiboniso emide eyayibanjelwe eTshayina, kunye nefestile yase China yokuphuhlisa intengiso yamanye amazwe kwaye ibalulekile iqonga lentsebenziswano yengingqi yeMpuma Asia. Ngo-2014, i-HTF yaphuculwa ngempumelelo yaya kwi-China-Russia Expo, ebibanjwe iminyaka emihlanu ilandelelana.
Amashumi amathathuth IHarbin yoQoqosho lweHlabathi kunye nezoRhwebo ziya kubanjelwa kwiHarbin yeNkomfa yaMazwe ngaMazwe kunye neZiko leMidlalo ukusukela nge-15 kuye kwi-19, 2019. Ngommandla womboniso we-86,000㎡, umisela i-International kunye ne-Hong Kong, iMacao ne-Taiwan Pavilion, i-China-Russia Cooperation I-Pavilion, oomatshini kunye neeMveliso zeMbane, Indawo yoBoniso oomatshini abakhulu njalo njalo. Lo mboniso ubandakanya iziphumo zeprojekthi yezixhobo zezimbiwa, ezolimo zale mihla, ukuveliswa kwezixhobo, i-aerospace, i-commerce ewela umda, urhwebo lwenkonzo njalo njalo. Uthotho lotshintshiselwano ngezoqoqosho kunye norhwebo, uthethathethwano kunye nokwenza umdlalo, ukwazisa, njengeeforamu, iinkomfa ziya kubanjwa ngokufanelekileyo.
I-HTF iya kudityaniswa ngokunzulu kwi "Belt and Road Initiative", yakhe indawo yentaba evulekileyo evulekileyo, unike umdlalo opheleleyo kwizibonelelo eziphambili zeendawo ezikwiNyakatho-mpuma yeAsia, umeme urhulumente noosomashishini abavela kwihlabathi liphela ukuba bathathe inxaxheba kulo mboniso kwaye ukukhuthaza unaniselwano olunonxibelelwano kwimarike yamanye amazwe, imali eyinkunzi kunye netekhnoloji.
Umenywa ngokufudumeleyo ukuba uthathe inxaxheba kuma-30th IHarbin Trade Fair yokwabelana ngamathuba oshishino kunye nokufuna uphuhliso oluqhelekileyo. Siza kubonelela ngeenkonzo ezijikelezayo kunye nezisemgangathweni kubabonisi abasuka ekhaya nakwamanye amazwe.
Ixesha leMiboniso: 8: 30-17: 00 ngoJuni 15 ukuya kwi-18, 2019
8: 30-14: 00 ngoJuni 19, 2019
Ixesha lokuNgena koMbonisi: 7:30 kaJuni 15, 2019
I-8: 00 ngoJuni 16 ukuya kwi-19, 2019
Usuku lokuThetha-thethana lwaBakhenkethi abaqeqeshiweyo: Nge-15 kaJuni 2019
Usuku lokuVulwa koLuntu: Nge-16 ukuya ku-19 Juni 2019
Umboniso weNkomfa yaMazwe ngaMazwe yeHarbin kunye neZiko leMidlalo
(Hayi. 301 Hongqi Str., Nangang Distr., Harbin, China)
I-86,000 ㎡ (3000 iminquba yamazwe aphesheya)
INTSHAYELELO YOMBONISO WEPVILILI NEENDAWO
EmaZweni, eHong Kong, eMacao naseTaiwan Pavilion
Itekhnoloji ephezulu kunye entsha, imveliso ekhethekileyo yommandla, utyalo-mali kunye neeprojekthi, ukutshintshiselana ngokwenkcubeko njalo njalo nakwamanye amazwe naseHong Kong, eMacao, eTaiwan.
I-Pavilion yokusebenzisana kwe-China-Russia
Indawo yomfanekiso weSizwe waseRussia. Ukubonisa umfanekiso wesizwe waseRussia kunye nentsebenziswano phakathi kwamashishini aphambili, ii-Oblast ezifanelekileyo kunye neMimandla ne China.
Indawo yokuBambisana kweTshayina neRussia. Ukubonisa imeko iyonke yamashishini aluncedo kunye nophuhliso lwasekhaya lwamaphondo amaTshayina (izixeko) kunye neRussia) (imimandla)
Indawo yoMboniso woMxholo. Amashishini amaTshayina nawaseRussia abonisa ngokupheleleyo iziphumo zeeprojekthi zentsebenziswano phakathi kwala mazwe mabini kwiindawo eziphambili ezinje ngokusebenzisana kwezimbiwa, ezolimo zale mihla, ukuveliswa kwezixhobo, i-aerospace, i-e-commerce enqamlezayo, ishishini lenkcubeko kunye neziseko zophuhliso.
D. Indawo yoVuselelo oluBanzi. Ukubonisa imfundo yesayensi nethekhinoloji, iinkonzo zezezimali, ukhenketho kunye nekhephu kunye nezixhobo zomkhenkce, ukhathalelo lwempilo yokuhlala, ukuthengisa okutsha kunye nokusetyenziswa okutsha, izixhobo zokwakha ezintsha zePhondo laseHeilongjiang
Oomatshini kunye neMveliso yeeMbane zikaMbane (Intente Yemiboniso)
Ukupakisha kunye nokushicilela oomatshini, oomatshini beplastiki, oomatshini beplanga, izixhobo zokwenza amanzi, indlela, ibhulorho, ulwakhiwo kunye noomatshini bam kunye neenxalenye, ukuqhubekeka kokutya kunye nokupakisha oomatshini, izixhobo zekhompyuter, iinxalenye zemoto, ulungiselelo kunye nezixhobo zokuhambisa kunye netekhnoloji kunye nezinye iimveliso zoomatshini.
Indawo yeMiboniso eNkulu yoomatshini (uMboniso wangaphandle)
Oomatshini bokwakha, oomatshini bezolimo kunye namahlathi, itekhnoloji yamandla e-biomass kunye nezixhobo, abakhweli kunye neemoto zothutho, iimoto zabakhweli, izixhobo zokhuselo lokusingqongileyo kukamasipala, izixhobo zongxamiseko, izixhobo zokuzonwabisa zangaphandle njl.
IMISEBENZI EMININZI YOSHISHINO
Ukudibanisa ngokudibeneyo iiforamu, iisemina kunye neminye imisebenzi yeshishini malunga nezolimo, amahlathi, oomatshini, i-e-commerce, ukuthengiswa kwamasiko, ukuthuthwa kwempahla, ukhenketho lwenkcubeko, utshintshiselwano lolutsha, uphuhliso lwezixhobo, iimveliso zoomatshini; Kwangelo xesha, "Ama-30thIsikhumbuzo seziganeko ze-HTF kunye nothotho lwezinye zezoqoqosho nezorhwebo, inzululwazi netekhnoloji, imisebenzi yokutshintshiselana ngenkcubeko.
Ababonisi banokubhalisa kwi-intanethi kwiwebhusayithi esemthethweni (www.chtf.org.cn), umhla wokugqibela wobhaliso ngu-Epreli 30, 2019.
A. Iholo A, B no-C
1. Imigangatho yamazwe ngamazwe 9㎡ （3m × 3m oth iminquba iyafumaneka nge-US $ 1,500 nganye ngexesha lomboniso. Indlu nganye esemgangathweni yangaphakathi iququzelelwa ngeziqwenga ezi-3 zeebhodi zokubonisa, idesika, izitulo ezi-3, izibane ezi-2, isokethi yamandla ye-220V / 3A (ngaphakathi kwe-500W), ibhodi ye-lintel enegama lesiTshayina nesiNgesi lomboniso.
2. Umgangatho ohonjisiweyo 9㎡ （3m × 3m oth amadokodo anezona mfuno zisezantsi ezingama-36㎡ ngexesha lomboniso nokwanda nge-9㎡ ziyafumaneka nge-US $ 1,900 inye ngexesha lomboniso. Itafile nganye yokuhombisa ngaphakathi ihonjiswe ngeziqwenga ezi-3 zeebhodi zokubonisa, idesika, izitulo ezi-3, ikhaphethi, izibane ezi-2, isokethi yamandla ye-220V / 3A (ngaphakathi kwe-500W), ibhodi ye-lintel enegama lesiTshayina nesiNgesi umbonisi.
3. Umboniso wangaphakathi womhlaba ongenanto ufumaneka nge-US $ 155 / ㎡ ubuncinci beemfuno ezingama-36㎡ ngexesha lomboniso kwaye unyuke nge-18㎡, kungekho zixhobo zomboniso.
B. Oomatshini kunye noMbane weeMveliso zeMbane （Intente yeMiboniso）
I-9㎡booth nganye ixabisa i-US $ 900 ngexesha lomboniso. Indlwana nganye iququzelelwa ngamaqhekeza ama-3 eebhodi zokubonisa, idesika, izitulo ezi-3, izibane ezi-2, isokethi yamandla ye-220V / 3A (ngaphakathi kwe-500W), ibhodi ye-lintel enegama lesiTshayina nesiNgesi lomboniso.
Indawo yomboniso yangaphandle iyafumaneka nge-US $ 30 / ㎡ ngexesha lomboniso, eyona ndawo incinci yokuqeshisa ngama-50㎡, akukho zibonelelo zemiboniso kunye namandla abonelelweyo.
1. Uyacelwa ukuba uxole kwirenti ngaphambi komhla we-15 kaMeyi 2019. Nakuphi na ukulibaziseka ekuhlawuleni le rhafu ingentla kuya kuthathwa njengokurhoxa ngokuzithandela kumboniso, kwaye indlwana ebekelwe wena iya kulungiswa.
2. Umhlawuli: IOfisi yoLawulo yase China Harbin yezoQoqosho nezoRhwebo
3. I-akhawunti yebhanki yeedola zaseMelika: iBhanki yase China, isebe laseHeilongjiang
4. Yongeza: Hayi. 19 Hongjun St., Nangang Dist., Harbin China
5. Inombolo yeAkhawunti: 166451764815
6. IKHODI YOKUKHAWULEZA: BKCHCNBJ 860
1. Umboniso weKhadi: yonke indlwana esemgangathweni (9㎡) incediswa ngamakhadi ama-3, yonke indawo yomboniso engama-50㎡ yenziwe ngamakhadi ama-6.
2. Ukuseta iBooth kunye neKhadi lokuDiliza: I-30 yuan ihlawuliswa ikhadi ngalinye. (Qaphela: Ababonisi banokungena ngaphakathi kwaye badilike ngokubonisa amakhadi abo ababonisi)
Ukuseta iBooth kunye neKhadi lokuDiliza imoto: imoto yokuseta umboniso kunye nokuqhaqha i-yuan ezingama-50 kuphela ezihlawulisiweyo kwikhadi ngalinye
Ngolwazi oluthe vetshe nceda ubhekise kule http://www.chtf.org.cn
UKUSETYENZISWA KWAMANQAKU NOKUXOSWA
1. Ukusetha iBooth kunye nexesha lokudiliza:
I-08: 00 kaJuni nge-8 ukuya kwe-12: 00 ngoJuni 14: Ukusetha indawo yokuhombisa
I-08: 00 kaJuni nge-12 ukuya kwi-12: 00 ngoJuni 14: Ukuseta imigangatho emiselweyo
12:00 Juni 14: Iholo yomboniso iya kuvalwa ukuze kuhlolwe ukhuseleko
15: 00 ngoJuni 19-18: 00 ngoJuni 20: Ukuqhaqha iBooth
2. Iindawo zokuhombisa zokuzilungisa zisebenzisa indlela yokufikelela kulwakhiwo kwaye zilandela ngokungqongqo “uLwakhiwo kunye neMigaqo yoLawulo loYilo loMboniso wase China-Russia”. Ngolwazi oluthe vetshe nceda ubhekise kule http://www.chtf.org.cn
3. Kwiindawo zokuhombisa, wonke umsebenzi wokumisela uya kwenziwa ngaphandle kweholo yomboniso kwaye banokuhlangana eholweni. Ukuphakama komboniso weminquba yangaphakathi akunakugqitha kwiimitha ezi-6.
4. Nceda ungenise kuthi isicwangciso somgangatho wendlu esemgangathweni okanye uqhaqhe umzobo webhodi yokwahlula phakathi kwamadokodo kwiKomiti yoLungiselelo yeMboniso ngaphambi kukaMeyi 31. Ukuba kukho naluphi na utshintsho olwenziwe emva kokugqitywa komnquba, umsebenzi wokusetha awuyi kwenziwa de isicelo samkelwe kwaye kuhlawulwe umrhumo owongezelelweyo emva komhla we-8 kaJuni.
5. Ngexesha lokumiselwa kwamadokodo, akuvumelekanga ukungena kwindawo yoluntu okanye ukuvimba izixhobo zokulwa umlilo. Umboniso kufuneka ucoce yonke inkunkuma yokuseta kunye nezinto zokupakisha kwangoko.
6. Imiboniso yokungena ngexesha lolonwabo ayivumelekanga.
1. Umboniso uya kubonelela malunga neenkonzo zababonisi kunye neendwendwe ezinje ngokubonisana, uthethathethwano lwezorhwebo, ukuhanjiswa kunye nokufuna ulwazi ukukhutshwa kwi-intanethi, njl.
2. Lo Mboniso uya kubonelela malunga neenkonzo zababonisi ezifana nokubhukisha ihotele, ukuqesha umguquleli, ukuqesha imoto, uhambo, njl.
3. IZiko leNkonzo kule pavilion linikezela ngezi nkonzo zilandelayo: ukuqesha izibonelelo zemiboniso, iposi, amatikiti, ibhanki, unxibelelwano, uthungelwano, iziko loshishino, njl.
4. Amanye amasebe afana ne-Customs, Inspection & Quarantin, i-Industry & Commerce, i-Quality Supervision, i-Intellectual Property Right, kunye ne-Law ziya kubonelela ngeenkonzo ze-site, ezibandakanya ukuthethathethana kwezomthetho nemigaqo-nkqubo, ukulungisa iingxaki kunye neempikiswano ngexesha loMboniso.
5. Lo Mboniso uya kubonelela ngeenkonzo kubabonisi ezifana nolwakhiwo lwewebhusayithi yeshishini kunye nolondolozo, umbonisi wolwazi malunga nomboniso, njl. Ngolwazi oluthe vetshe nceda ubhekise ku-http: //www.chtf.org.cn
IKomiti yoQuquzelelo ibonelela ngemiboniso yenkonzo yamalungiselelo kubabonisi.
Abafowunelwa: UNksk Chen Liping
Ifowuni: + 86-451-82340100
Ifeksi: + 86-451-82345874
Umboniso uya kubonelela ngeenkonzo zentengiso kubabonisi, ikakhulu abajongana nentengiso ngaphakathi nangaphandle kweholo yomboniso, izitrato eziphambili zaseHarbin, iZikhokelo zeFair, amatikiti okungena kunye newebhusayithi esemthethweni.
Abafowunelwa: UMnu Zhang Jianxun
Umnxeba: + 86-451-82273912 imoto13351780557
Ifeksi: + 86-451-82273913
INKXASO-MSEBENZI UKUQESHWA KWABASEBENZI
Abafowunelwa: Mnu. Wang Zhijun
Ifeksi: + 86-451-82340226
Uxanduva lokwazisa nokwazisa ababonisi, ingxelo eguqukayo yomboniso; Lungiselela udliwanondlebe olukhethekileyo neendwendwe ezibalulekileyo kunye neenkokheli zeshishini ngamajelo eendaba aphambili ekhaya nakumazwe aphesheya.
Abafowunelwa: UNksk. Zhang Yuhong
Abafowunelwa: UNksk Liu Yang
Ifowuni: + 86-13313685089
Ingqungquthela ye-Heilongjiang kunye neBhunga leMiboniso
Yongeza: Hayi. 35 Meishun St., Nangang Dist., Harbin China 150090
Ifeksi: + 86-451-82345874, 82340226
Indawo yewebhu: www.chtf.org.cn